Madaxweyne Farmaajo oo markii ugu horaysay ka hadlay Kiiskii Cabdikariim Qalbidhagax [VIDEO] | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Farmaajo oo markii ugu horaysay ka hadlay Kiiskii Cabdikariim Qalbidhagax [VIDEO]
MUQDISHO – Madaxweynaha Dowladda Federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraysi uu siiyay BBC-da uga hadlay arrimo badan iyo Waxqabadka dowladda oo sanad jirsatay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka jawaabay su’aalo ay soo weydiiyeen shacabka ayaa waxaa kamid ahayd arrinta ugu weyn ee sida gaarka ah loo hadal hayo kiiskii Muwaadinkii Cabdikariim Qalbidhagax oo ay dowladu u dhiibtay Itoobiya.
Muwaadin Cabdikariim Qalbidhagax ayay ciidamada NISA ka qabteen Koonfurta magaalada Gaalkacyo bishii Agoosto sanadkii hore iyadoona maalmo kadib la geeyey Muqdisho,halkaasoo looga sii gudbiyay Baydhabo intaan lagu wareejin ciidamada Dowladda Itoobiya.
Madaxweyne Farmaajo oo aan marna soo hadal qaadin kiiskan shantii bilood ee lasoo dhaafay,dhacdadan oo ay si weyn shacabka uga hadleen isla markaana keentay in Baarlamaanka Federaalka baaritaan uu ku sameeyey ku sheegay in sharci daro ahayd dhiibista muwaadinkaas iyo weliba go’aankii Xukuumadda ku taageertay dhiibista Qalbidhagax.
Madaxweynaha oo xalay ka jaawaabayey su’aalaha shacabka ayaa waxaa kamid ah dadka su’aalaaha soo diray uu Madaxweynaha weydiiyay waxa uu ka ogaa arrinta Qalbidhagax?
Waxaan ognahay in Baarlamaanka ama Golaha Shacabka ay arrintaasi ka doodeen kana soo saareen qoraal, iyagoo u codeeyey, maxaa yeelay iyagaa ah hay’ada ugu sareysa ee sharci dajinta, waxayna gaareen go’aan, kaasi oo ah kama danbeys….” ayuu yiri Madaxweynaha oo hadalkiisa intaasi ku koobay.
Baarlamaanka Federaalka ayaa go’aankii kasoo baxay lagu sheegay in dhiibista muwaadinkaasi ahayd mid sharci darro ah,waxaana lagu laalay go’aankii kasoo baxay Golaha Wasiirada bishii September ee lagu sheegay in Kooxda ONLF ay tahay argagaxiso.
Hoos ka daawo Su’aalaha Madaxweynaha la weydiiyay.